7 Mazuva Ano Themes eKDE Plasma Desktop Nzvimbo | Linux Vakapindwa muropa
Pasina mubvunzo KDE Plasma ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza dzeLinux desktop uye chanhasi chatingawana uye icho kuwedzera kune icho vane maficha makuru uye sarudzo dzekumisikidza iyo inobvumira mushandisi kugadzirisa ino nharaunda kusvika pakakwirira.
Kunyangwe vazhinji vatsva kuLinux vanogona kuona KDE kana zvasvika mukugadzirisa zvakati omei, chokwadi ndechekuti ine jee, asi hapana chekunyora pamba nezvayo.
Pachiitiko ichi Tichaona mamwe ematimu andine chokwadi chekuti uchada uye uchada kuisa mu KDE yako.
Kuisa iwo madingindira iwe unofanirwa kuisa dhairekodhi dhairekitori iyo inowanzo kugoverwa mune yakadzvanywa faira mukati meTemes faira yako.
Ingo tsvaga iwo maforodha mu / usr / share / theme kana ~ / .themes.
4 Maia Transparent
5 Arc Theme
Musoro weNumix iyo yemazuva ano yakati sandara gtk theme ine musanganiswa wechiedza uye wakasviba zvinhu. Ndizvo inoenderana nenzvimbo zhinji dzedesktop, saGnome, Kubatana, Cinnamon, Xfce, Mate, nevamwe.
Iwo maNumix maikoni ane matatu akasiyana, ayo anosanganisira iyo yekutanga vhezheni, iyo Numix Circle vhezheni inova denderedzwa-yakaumbwa mamaki ekushandisa, uye iyo mraba musiyano ine mativi-akaenzana ekushandisa mifananidzo.
Kuisa iyi package, ingo mhanya unotevera mune terminal:
Helium ndizvo yakajeka, yakajeka uye yakajeka theme iyo inoitirwa kupa ine hupenyu uye ine mavara kutaridzika kune yako system.
Mahwindo uye madhesiki ekushongedza ane chena chando chando girazi kunzwa. Sanganisa iyo ine yakajeka icon theme, uye iwe uri munzira yako yekuve unofara chaizvo Plasma desktop.
Ndicho chaiyo yemazuva ano theme uye kutsvaga zviri nyore pamwe nechidiki che minimalism kupa manzwiro enharaunda uye mahwindo ane nzvimbo huru uye mvura.
Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera yako yakanaka sarudzo yemavara uye musiyano kuti mukubatana neye minimalist kana flat icon theme iyo theme inogona kumira zvakanyanya.
Kana nemukana wakanzwa nezveManjaro Linux kana iwe ukatanga kuyedza iyi kugovera kweLinux kunoenderana neArch Linux. Iyi nhaurwa inokuyeuchidza zvakanyanya mune ino.
Iyi idingindira rakazara pachena kune vateveri vekunyanyisa kujeka kwekushandisa pamwe nerima, homogeneous mifananidzo. Maia Transparent inotora pachena kwaPlasma uye inoita kuti ishande zvakanyanya.
Iyo Arc theme ndeye yakanaka yakanaka flat theme ine yakajeka zvinhu, Arc yeKDE inotaridzika zvakanyanya sezvinoitika pamaGTK desktops sezvo ichishandisa iyo yakafanana color scheme. }
Nekudaro, pane mimwe misiyano yakakosha.
MuPlasma, Arc inoshandisa mashoma ekujeka. Izvo hazvibvise pane semi-Chinyorwa dhizaini Kana ichibatanidzwa neye icon theme, Arc inounza yakasarudzika nyowani dhizaini kuPlasma.
Nitrox Iyo yakapusa, yakachena, minimalist uye yakanaka kutaridzika icon yakatarwa, yakagadzirirwa nzvimbo dzeGTK-dzakadai seGnome, Cinnamon, Mate, XFCE, LXDE, KDE Plasma, Plasma 5 uye Android.
Nitrox chikamu cheNitrux Artwork Project, ino icon theme ndeimwe yeakakwana kwazvo aunogona kuwana.
Iyi icon pack ine akati wandei sarudzo yatinogona kusarudza zvinoenderana nemuvara weGTK + theme yatinoshandisa.
Pakati pemhando dzakasiyana dzatinogona kuwana:
NITRUX, NITRUX-Mabhatani, NITRUX-Azure, NITRUX-Rima, NITRUX-Yakajeka-Zvese uye NITRUX-Mint.
Iyo Adapta theme inyowani nyowani unodiwa munzvimbo yeGTK.
Nyaya iyi inotarisira kuunza zvese zvinoda vanhu nezveAdapta kuPlasma, uye inoita basa rakanakisa reizvozvo.
Adapta KDE inopa KDE Kutaridzika kweMidziyo uye kunzwa pasina kukanganisa mweya wekutanga wePlasma.
Iyo inoshandisa inotonhorera color scheme, seBreeze, asi inozviita nenzira yakatosiyana zvakakwana kuti ikwanise kuzivikanwa pakarepo sechinhu chakasiyana zvachose. Adapta ine Plasma ine yakanakisa matatu-mativi anotaridzika, ayo anonyatsoisa parutivi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » 7 madingindira emazuva ano eKDE Plasma desktop nharaunda
Esteeee, haufanire kuisa mifananidzo yese mu kde madingindira, iwe waisa maviri mune gnome
CLIP OS: inoshanda system kubva kuFrance Cybersecurity Agency